Alshabab oo sheegatay qarax Ceel-waaq lagula beegsaday ciidanka Kenya. – Radio Daljir
Alshabab oo sheegatay qarax Ceel-waaq lagula beegsaday ciidanka Kenya.
Noofember 30, 2016 11:15 g 0
Ceel-waaq, Dec 01 2016-Wararkii ugu dambeeyey ee aan kahelayno degmada Ceel-waaq ayaa sheegaya in halkaasi qarax lagula beegsaday gaadiid dagaal oo ay wateen kolanyo katirsan ciidanka difaaca ee wadanka Kenya.
Qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa khasaaro burbur leh waxuu ka soo gaaray kolonyadii ay wateen Ciidamada Kenya.
Dhanka kalena kooxda Al Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada Qaraxasi ayaa shaaciyay in Qaraxa ay ku gubeen hal gaari iyo saanadii militari ee saarneyd.
Sarkaal u hadlay Al Shabaab ayaa waxuu tilmaamay in sidoo kale Xoogaga al Shabaab ay weerar gaadmo ahaa ku qaadaay Gaadiid ay wateen Ciidamada Kenya oo marayay nawaaxiga Magaalada Gaarisa.
DHEGEYSO-Wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo kahadlay cabashada gaadiidleyda.
AMISOM oo war ka soo saartay ammaanka doorashada Muqdisho ka socota.